Walitti bu'insa Yaman: Saa'udii Yaman seenuu dhorkuun ishii gargaarsaaf' 'baay'ee rakkisaa' ta'e - BBC News Afaan Oromoo
Biyyoonni Saa'udii jalatti qindoomuun finciltoota lolaa jiran waan gara Yaman galchu mara waan cufaniif eejansoonni gargaarsa kennan biyya Yaman waraanni miidheef gargaarsa namoomaa gochuuf rakkannee jedhan.
Mootummoonni gamtoomanii fi qaxxaamura diimaa akka jedhanitti haallli 'balaa hamaa' lammiilee miiliyoona hedduu ta'aniifi gargaarsaan jiraatan miidhaa jira.
Saa'udii Arabiyaan finciltoonni Haawutii meeshaa waraanaa Iraan irraa waan ergamaa jiruuf sababa kanaan biyyatti galchu akka dhorkite ibsiteetti.
Saa'udiin Tehraan 'weerara waraanaa kallattii' Yamanitti goote jechuun himatti.
Iraan garuu finciltoota bara 2015 irraa eegalani biyyoota Saa'udii waliin qindoomanlolaa jiraniif meeshaa waraanaa akka kennaa hin jirree dubbatti.
Goodayyaa suuraa Ilmi mootii Mohaammad Biin Saalmaan yaaliin misaa'eelaa 'tarii akka gocha waraanaatti ilaalaalamu mala' jedhaniiru
Misaa'elin baalistikii gaafa Sambataa magaalaa guddoo biyyattii biratti dhukaafame ture akka rukutame deebi'u ta'eera.
Ilmi mootii Saa'udii Mohaammad Bin Salmaan finciltotaaf rookeettii kennuun 'akka lola loluutti ilaalama' jedhaniiru.
Mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun Ameerikaa Niiki Haaley gaafa Sambataa akka jedhanitti misaa'elonni kunneen maddi issaanii Iraan ta'u danda'a.
Akka isaan jedhanitti Iraan murtii mootummoota gamtoomani lama erga takkaa waan diigdeef himatamuu qabdi jedhaniiru. Kanneen jechuu isaaniiti:
Osoo manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomani hin beekiin meeshaa waraanaa kennuufi gurguruu Iraan dhorkamtuus cabsuu ishii
Hoggantoota Haawtii fi pirezidantii duraanii Yaman Ali Abdullah Saaleh daabalate meeshaa waraanaa akka hin kennine dhorkame ture
Minsiteerri dhimma alaa Iraan misaa'elin furguggifame 'weerara' Saa'udiif loltoota Haawtiin kan dhukaafamedha jedheera
Goodayyaa suuraa Gargaarsa mootummoota gamtoomani inni guddaan karaa buufata doonii Hodeyidaa seena
Dhukaasa misaa'elaa hordofe, qindoominni biyyootaa Saa'udiin qajeelfamu akka ibsetti daandiin, galaanni akkasumas dirreen xiyyaaraa Yamanitti geessu 'yeroof' cufameera. Gargaarsi namoomaa garuu haalaan qoratame darbu danda'a jedheera.
Haa ta'u malee, gaazexessaan BBC Imogen Fowulkes Geneevaati akka jetteetti eejansiiwwan gargaarsa kennan daangaan Yaman geessu cufamuu isaatiin gadduu isaani ibsaniiru.
Lammiilee 900, 000 miidhaa koleeraan hubamanif taabileetii kiloorinii dooniin fe'ame dhorkamuu isaa Qaxxaamurrii Diimaa beeksiseera.
''Yeroo ammaa balaa hamaafi guddicha addunyaati jennuuf daandileen kuni yoo cufaa ta'an ummata rakkachaa jiruuf hamaadha,'' jedhan dubbii himaan waajjira gargaarsa namoomaa qindeessu Jeens Laayerke.
Ummanni miiliyoona 7 ta'u beela'uuf akka jiru mootummoonni gamtoomani ibseera.
Biyyattiin oomisha alaa galuu irratti kan hundoofte yoo ta'u yeroo ammaa garuu nyaata, boba'aas ta'e qorichi biyya keessa galaa hin jiru.
Akka mootummoota gamtoomanittii, erga biyyoonni Saa'udii jalatti qindoomani Bitootessa 2015 eegalee walwaraansa Yaman keessa harka galchatani as ummata 8,670 -harki 60 lammiilee nagaadha - kan ajjeefaman yoo ta'u 49,960 kan ta'an immoo waraana qilleensarraa fi lafaan miidhamaniiru.
Itoophiyaan zayita boba'aa Sawudiirraa liqaan gaafatte
'Humni waraanaa mootummaa nu dararaa jira'
Itoophiyaa - tajaajila kanfaltii dijitaalaa haaraa
MM Dr. Abiy Ahimad barsiisota waliin marii gaggeessuuf
Turtii Nelsan Maandeellaa Itoophiyaa keessaa
Aanga'oonni Sudaan Kibbaa aangoo waliif qooduuf
Seera haaraa Israa'el Jeewishoota qofaaf jedhu ragga'e